Barbados dia namoaka fanambarana momba ny mpandeha an'arivony olo-malaza izay manaporofo fa tsara ny COVID-19 | Vaovao momba ny dia any Barbados
Vaovao momba ny dia any Barbados • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Vaovao Karaiba • Vaovao momba ny indostrian'ny cruise • Raharaham-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Other • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Vaovao momba ny fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News
Home » Lahatsoratra » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Barbados » Barbados dia namoaka fanambarana momba ny mpandeha an'arivony olo-malaza izay manaporofo fa tsara ny COVID-19
Hatramin'ny nandaozany an'i Barbados dia niantso antso tany amin'ny toeran-kafa telo ilay sambo, ary miverina any St. Maarten amin'izao fotoana izao izay hijanonan'ny sambo ara-potoana.
Ny Millennium an'ny olo-malaza dia niantsona tany Barbados ny alatsinainy 7 jona 2021 ho seranan-tsambo fiantsoana voalohany
Mpandeha an'arivony taonan'ny olo-malaza roa no nanaporofo fa tsara tamin'ny COVID-19
Maherin'ny 1200 ny mpandeha vita vaksiny feno sy ny mpiasa ao aminy
Ny Celebrity Millennium dia nandao ny fonenany tao Philipsburg, St. Maarten ho an'ny làlana fitsangantsanganana 7 alina ary niantsona tao Barbados ny alatsinainy 7 jona 2021 no seranan-tsambo fiantsoana voalohany. Ny mpandeha rehetra dia notsapaina alohan'ny sambo-fiara ary ratsy tamin'izany fotoana izany. Hatramin'ny nandaozany an'i Barbados dia niantso antso tany amin'ny toeran-kafa telo ilay sambo, ary miverina any St. Maarten amin'izao fotoana izao izay hijanonan'ny sambo ara-potoana.
Nampahafantatra anay ireo mpiara-miasa aminay Cruises olo-malaza fa nandritra ny faran'ny fitsapana fitsangantsanganana an-tsambo, raha niverina ho any St. Maarten, mpandeha roa tamin'ireo mpandeha feno vaksiny feno 1200 mahery sy mpikambana tao anaty sambo, no nanaporofo fa tsara tamin'ny COVID-19. Samy asymptomatika ary mandeha tsara. Mirary azy ireo ho sitrana haingana.
Ny zava-misy nitranga tamin'ny faran'ny fitsapana fitsangantsanganana an-tsambo dia manamafy ho antsika ny tanjaka sy ny maha-zava-dehibe ny fanarahana ny protokolola rehetra amin'ny fotoana rehetra. Ny fifikirana mafy amin'ny protokol dia ahafahan'ny tsirairay mamerina ny zavatra niainany tamin'ny fomba izay akaiky kokoa ny mahazatra, raha mbola mahatsiaro tena fa mijanona miaraka amintsika ny COVID ary noho izany dia mila mampifanaraka isika. Io no fototry ny fanatonantsika amin'ny fotoana rehetra ary izany no antony nanohizanay nitily an-tsitrapo tamin'ity fitsangatsanganana voalohany ity. Ho fitsangantsanganana an-tsambo dia namolavola sy nampihatra ny fombafomba fidirana an-tsisintany henjana sy ny fizotrany toy ny fitsangatsanganana manjelanjelatra izahay, hahafahanay mitantana tsara ny hetsika amin'ny fomba mahomby sy manome ho an'ny fitadiavana fifandraisana. Zava-dehibe ny hanohizantsika rehetra ny fanarahana ireo protocola rehefa mifanerasera eo an-toerana sy mandray ireo mpandeha izahay.